eNasha.com - गुगल अफिस !
गुगलका संस्थापकहरु ल्यारी पेज र सर्गेई ब्रायन त्यसै फोब्स म्यागेजिनको अरबपति-सूचिमा परेका होइन रहेछन् । (ताजा खबरअनुसार फोब्स म्यागेजिनले उनीहरुलाई अरबपतिहरुको सूचिमा राखेको छ ।) को को त्यो सूचिमा परेका छन् भनेर बासी खबर तपाइँलाई सुनाउन लागेको होइन, तर किन उनीहरु त्यो सूचिमा आएछन् भनेर आर्श्चर्य व्यक्त गर्न हो !
भर्खरै न्यूयोर्क टाइम्सले खबर छापेको छ कि सिलिकन उपत्यकामा काम गर्नेहरु गुगलको कार्यालयमा काम पाउनेहरुलाई भाग्यमानीको सूचिमा राख्ने गरेका छन् । अन्य कम्पनीमा काम गरिरहेकाहरु गुगलमा काम गर्नेप्रति इष्र्याभाव राख्ने गरेका छन् । त्यस्तो किन पनि राख्छन् भने गुगलले त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरुलाई यति सुविधा दिएको छ कि बाहिरियाहरुले त्यो त इष्या गर्ने नै भए !
विशिष्ट भान्से (सेफ) उपलब्ध गराएर गुगलले कामदारहरुलाई स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध गराउने, फूर्सद हुने बित्तिकै एडवेन्चर रुच्नेहरुका लागि 'क्लाइम्बिङ वाल', खेलकूद रुचाउनेका लागि भलिबल कोर्ट अनि पौडी मन पर्नेहरुका लागि भने दुइ दुइ वटा पोखरी.... ओहो ! अफिस होस् त यस्तो पो ! यतिले नै चित्त नबुझाउनुस्, छेउमै तपाइँको कार सफा गर्ने ठाउँ, नाइ गृह (कपाल काट्ने ठाउँ) आदि पनि छन् । ए ! बरु मैले छुटाउनै नहुने कुरा छुटाउन पुगेछु ! त्यो हो डाक्टरको नियमित चेकअप गर्ने सुविधा पनि !
सिलिकन उपत्यका सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम हुने ठाउँमध्येमा गनिन्छ, तर गुगलले त्यो ट्राफिक जाम हुने समयलाई पनि सदुपयोग गराउन सबै कार्यकर्ताहरुलाई वायरलेस इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएको छ । जसका कारण अफिस पुगुञ्ज्याल कामदारहरुले आफ्नो आधा काम ट्राफिक जामकै अवधिमा सकून् । यति धेरै सुविधा त संसारको कुनै पनि कम्पनीले उपलब्ध गराउँदैन होला, तर गुगलले यी कामदारलाई आफ्नो छोराभन्दा बढी 'प्यारो' गरेको छ । ताकि इन्टरनेटको घाँटी रेट्ने प्रतिस्पर्धामा नयाँ पुस्ताका प्रतिभासम्पन्नलाई गुगलको अफिसमा काम गर्ने रुचि जगाउन सकोस् ।
१२ सय बढी दैनिक काम गर्ने यो कार्यालयमा एक चौथाई कामदार स्थानीय छन् । तिनलाई ३२ वटा सुविधा सम्पन्न बसमा अफिस ल्याउने र लैजाने पनि सुविधा छ । अफिसभित्र घरपालुवा जनावरलाई प्रवेश, आफ्नो क्युबिकललाई सजावट गर्न मिल्ने आदि सुविधाले त्यहाँका कामदारहरु आफूलाई भाग्यमानी ठान्ने गरेका छन् ।
पेट्रोल या डिजलको कुरा छोड्नुस्, प्रविधिमा विश्वास गर्ने गुगलले उपलब्ध गराएको गाडी चाहिँ बायोडिजलबाट चल्ने गरेको छ । अँ, त्यो गाडीमा चढेको पैसा तपाइँले तिर्नु पर्दैन है ! कामदार चाहिँ बसमा आउँछन् भने यिनको संस्थापकहरु केमा आउलान् त - भन्नै पर्दैन, उनीहरुलाई ओसार्ने चाहिँ बोइङ ७६७ हो ।
यिनको बिहानीको काम पाँच बजे शुरु हुन्छ अनि बेलुकीको काम चाहिँ ३:४० मा । यता गुगलका भान्सेहरुको अन्तिम काम भने राति १०:४० सम्म छ । यति धेरै कामदारलाई घरअफिस ओर्सार्न हरेक १५ मिनेटमा सटल गाडीहरु दौडिरहेका हुन्छन् । आउजाउलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न, ट्राफिकको ओहोरदोहोर नियमित पार्न यिनको एउटा विशिष्ट समूह नै लागिपरेको हुन्छ । कतिसम्म भने गुगलले आफ्नो समानान्तर रोड पनि बनाएको छ र यो यति लामो छ कि टेड विड्बी भन्छन्- "राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा गुगलले बनाएको जत्ति लामो सडक शायदै अरुले बनाएका छन् !"
कामदारलाई यी सुविधा दिएपछि सिलिकन उपत्यकाका अन्य कम्पनीलाई कामदार आकषिर्त गर्न चर्को परिरहेको छ । भयङ्कर नाफा गरिरहेको यो कम्पनीलाई नाफा दिलाउन यी चिजहरुले भलै सहयोग नगरेका होलान् तर क्षमतावान् कामदार आकर्षित गर्न भने पक्कै सघाएको छ । विल्त्स् कार्पेन्टर, ४५, जो भर्खरै गुगलमा कार्यरत छन्, भन्छन्- "पहिला म माइक्रोसफ्टमा काम गर्थें, तर यहाँ काम गरेयता मेरो जीवनको स्तर नै बदलिएको अनुभव गरिरहेको छु ।"
हुन पनि यहाँ टेलिफोनमा गफ गर्न (वाहियात बाहेक) छुट छ । साथीसँग ठट्टा-मजाकका लागि प्रशस्त ठाउँ छ भने आइपड सुन्न र भिडियो हेर्न अनि इन्टरनेट सर्फगर्न पाइन्छ । यसरी निजी मनोरञ्जन गर्दा अरुलाई बाधा नपुर्‍याउन र अरुलाई सम्मान गर्न सिकाएको ३३ वर्षीया कार्यक्रम संयोजिका डायना अल्बर्घिनीको धारणा छ ।
२३ वर्षीय वेब एप्लिकेशन इञ्जिनीयरलाई सटल बसले कतिसम्म लोभ्यायो भने उनले एप्पल कम्प्युटरको जागीर छाडेर यसमा हुँइकिन गुगल छिरे, भन्छन्- "अन्य आकर्ष कुरा त थिए नै, यो गाडी मेरो घरअघिल्तिर आउन थालेपछि भने मैले त्यहाँको जागीर छाडेँ ।"
सिलिकन उपत्यकामा याहुले पनि यस्तै सेवा उपलब्ध गराउन शुरु गरेको छ, देखासिकी गर्दै । एक पत्रकार लेख्छन्- "गुगल चाहिँ कोक थियो अनि याहुले दिएको सुविधा चाहिँ पेप्सी !" किनभने याहुको सटल गाडी पनि बायोडिजलबाट चल्ने गर्दथ्यो भने गुगलले जहाँजहाँ सुविधा दिएको थियो, त्यहीँत्यहीँ यो गाडी पुर्‍याएको छ । त्यति मात्र कहाँ हो र, गाडीभित्र इन्टरनेट सुविधा पनि राखिएको छ । (स्मरण रहोस्, अहिले याहू र गुगलबीच घाँटी रेट्ने प्रतिस्पर्धा छ ।)
यो सुविधा कति प्रभावकारी छ भने इबे वेबसाइटले पनि यस्तै सुविधा शुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यता फेसबुक वेबसाइटले आफ्ना कर्मचारीलाई अफिस छेउ बास बस्न ६ सय डलरमा सुविधा दिइरहेको छ । यस्तो सुविधा दिएको देखेर इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्शन एजेन्सीले उत्कृष्ट कामगर्ने थलोको रुपमा गुगल, इन्टेल र ओराकल कम्पनीलाई चिनाएको छ । माइक्रोसफ्टलाई पनि काम गर्न रुचिपूर्ण थलोको रुपमा उक्त संस्थाले परिचित गराएको छ ।
इन्टरनेट भव्यता गुगल माया सुन्दरी सेलेब्रिटी बलिउड नग्नता मुद्दा मामिला श्रीमानश्रीमती मूर्ख्याइँ कीर्तिमान विज्ञापन परिस्थिति फट्याइँ हलिउड उदेकलाग्दो उदारता उपाय सेक्स